कोरोना अपडेट(कोभिड -१९) Archives - Nepali in Australia
Category: कोरोना अपडेट(कोभिड -१९)
August 13, 2021 autherLeaveaComment on बज्यो खतराको घन्टी ! काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा १०८९ संक्रमित थपिए , देश भरि कति संक्रमित थपिए? २७ जनाले ज्यान गुमाए
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार थप एक हजार ८९ जनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौंमा ७९९ जनामा, ललितपुरमा १२८ र भक्तपुरमा १६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ११ हजार ५९६ जना सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौंमा आठ हजार ४०७, ललितपुरमा एक हजार ८२७ र भक्तपुरमा एक हजार ३६२ जना […]
August 13, 2021 autherLeaveaComment on को’रोना खोप भनेर ८ हजार बढीलाई नुनपानी लगाइदिएको खुलासा
एजेन्सी । जर्मनीमा को’रोना भाइरस (को-भि’ड–१९)विरुद्धको खोप भनेर ८ हजार बढीलाई नुनपानी लगाइएको खुलेको छ । बीबीसीका अनुसार नर्थ सी नजिकै फ्रिसल्यान्डस्थित खोप केन्द्रमा एक स्वास्थ्यकर्मीले को’रोना विरुद्धको खोपको साटो नुनपानी लगाइदिएकी हुन् । उक्त घटना मार्च र अप्रिलमै सार्वजनिक भएको थियो । त्यो बेला ६ जनलाई मात्रै नुनपानी दिइएको बताइएको थियो । आरोपित स्वास्थ्यकर्मीले […]
August 7, 2021 autherLeaveaComment on आउदाे ६ महिनाभित्र नेपाल यस्तो डर लाग्दो अवस्था हुने,विज्ञले दिए यस्तो सङ्केत!
आउदाे ६ महिनाभित्र नेपाल यस्तो ड`र लाग्दो अवस्था हुने, विज्ञले दिए यस्तो सङ्केत ! अबको चारदेखि ६ महिनाभित्र सबै उमेर समूह तेस्रो लहरको संक्रमणको जोखिममा रहेको विज्ञले औंल्याएका छन् । नेपालमा अहिले पनि करिब ८ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र खोप लिएका र बाँकीका बारेमा अन्योल रहेको अवस्थामा खोप नलिएका उमेर समूह जोखिममा पर्ने उनीहरूको तर्क छ […]
July 31, 2021 autherLeaveaComment on को’रोना संक्रमण बढेपछि पुनः दुई साता कडा लकडाउन हुने (सहि कि गलत ? )
को’रोना संक्रमण बढेपछि अर्घाखाँचीमा पुनः दुई साता लकडाउन हुने भएको छ । दोस्रो चरणको संक्रमण दर उकालो लागेपछि बैशाख २० गतेबाट शुरु भएको लकडाउन असार १४ गतेसम्म कायम थियो । एक महिनापछि जिल्लामा पुनः लकडाउन गर्नुपरेको हो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले साउन १६ गते राती १२ बजेदेखि लागू हुने […]
July 30, 2021 autherLeaveaComment on चीनबाट आठ लाख डो’ज भेरोसेल खोप आज नेपाल आइपुग्दै
काठमाडौं- चीनबाट को’रोना भाइरसवि’रुद्धको थप आठ लाख काठमाडौं- चीनबाट को’रोना भाइरसवि’रुद्धको थप आठ लाख डोज भेरोसेल खोप आज दिउँसो नेपाल आइपुग्दै छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज आठ लाख काठमाडौं- चीनबाट को’रोना भाइरसवि’रुद्धको थप आठ लाख डोज भे’रोसेल खोप आज दिउँसो नेपाल आइपुग्दै छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज आठ लाख डोज खोप लिएर आज दिउँसो काठमाडौं […]
July 29, 2021 autherLeaveaComment on भर्खरै सारा नेपालीका लागी सारै दु’खद् खबर ! एकैदिन यतिधेरै जनामा भेटियो को’रोना, नेपालमा घटेन संक्र’मण (सबै सजक रहन सेयर गराै)
भर्खरै सारा नेपालीका लागी सारै दु’खद् खबर ! एकैदिन यतिधेरै जनामा भेटियो को’रोना, नेपालमा घटेन संक्र’मण (सबै सजक रहन सेयर गराै) भर्खरै सारा नेपालीका लागी सारै दु’खद् खबर ! एकैदिन यतिधेरै जनामा भेटियो को’रोना, नेपालमा घटेन संक्र’मण (सबै सजक रहन सेयर गराै) भिडियो हेर्नुहोस् याे समचार पनि पढ्नुहोस् टीका सानू एक बिशिस्ट लोक गायिका सगै […]
July 28, 2021 July 28, 2021 autherLeaveaComment on नेपालमा फेरि डेल्टा भेरिअन्ट पु`ष्टि
बीबीसी – नेपालमा फेरि भाइरसको नयाँ उत्परिवर्तन पुष्टि भएसँगै सम्भावित जो खिमबारे मानिसहरूले चिन्ता एवं चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। नयाँ दिल्लीस्थित एउटा प्रयोगशालामा जीन सीक्वन्सिङ गर्दा भाइरसका तीनवटा नमुनामा उत्परिवर्तन पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जेठको मध्यदेखि असार मसान्तसम्म देशका विभिन्न भागबाट सङ्कलित नमुनामध्ये ४७ वटा असार ३० गते […]
July 28, 2021 autherLeaveaComment on काठमाडौँमा फेरि बज्यो खतराको घन्टी , के अब तेस्रो लहरको संकेत हो त ?
पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दर बढेर २० प्रतिशत पुगेको छ । एक हप्ताअघिसम्म सङ्क्रमण दर नौ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले ११ प्रतिशतले बढेको कामपाले जनाएको छ । जेठको तेस्रो हप्ता परीक्षण गरिएकामध्ये ७० प्रतिशतलाई सङ्क्रमण देखिने गरेको थियो । निरन्तर भएको लकडाउन र सजकता अपनाउँदा सङ्क्रमण दरमा कमी आए पनि पछिल्लो […]
July 22, 2021 autherLeaveaComment on काठमाडौँ उपत्यकामा फेरी बढ्न थाले संक्रमित
काठमाडौँ उपत्यकामा ६९७ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । ललिपुरमा १२८ जना, काठमाडौँमा ४९० र भक्तपुरमा ७९ जना सङ्क्रमण थपिएका हुन् । उहाँले अझ पनि धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित आ’शङ्कामा रहेकाले परीक्षणको दर बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “जति धेरै परीक्षण ग¥यो । त्यति नै मानिसलाई ब’चाउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पत्ता लगाउनका लागि परीक्षणको दा’यरा बढाउनुपर्दछ […]
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अहिले ९६ जना कोभिड–१९ संक्रमित भर्ना भएर उपचाररत छन् । अस्पताल भर्ना भएकामध्ये ३० जना सघन उपचारकक्षमा उपचाररत छन् । तीमध्ये १५ जना भेन्टिलेटरमा छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पनि २० वटा आईसीयू बेड कोभिड संक्रमितको उपचारकै लागि प्रयोग भएका छन् । वीर अस्पतालमा कोभिड संक्रमणका […]